जनताको स्वास्थ्य अब मेरो हातमा छः मन्त्री लालबाबु पण्डित - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
जनताको स्वास्थ्य अब मेरो हातमा छः मन्त्री लालबाबु पण्डित
आकाश क्षेत्री काठमाडौं फागुन ५
राजधानी काठमाडौं र अन्य ठूला शहरहरुमा सुत्ने बेलामा मात्र माक्स निकाल्नु पर्ने खराब अवस्था भएकाले वातावरणलार्इ सुधार गर्दै जनसंख्यालार्इ सन्तुलनमा ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै बिहिबार शीतल निवासमा दुई जना मन्त्रीले मात्र सपथ लिए– जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डित र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापा मगर। अनपेक्षित रुपमा मन्त्रीको सपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पण्डितलाई ‘सरप्राइज’ दिएको चर्चा पनि भयो। तर अघिल्लो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर चर्चा बटुलेका पण्डितलाई फेरि सुरुमै मन्त्री बनाएकोमा ओलीले प्रशंसा पनि कमाइरहेका छन्। साइकल चढेर निर्वाचन प्रचारमा जुटेको भन्दै बिराटनगरमा चर्चा कमाएका पण्डितले नेपाली कांग्रेसको बलियो पकड क्षेत्रमा शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका थिए। ‘साइकल मन्त्री’ को उपनाम पाएका पण्डितले अब वातावरण मन्त्रालयमा के गर्छन् त? नेपालखबरको मन्त्री संवाद श्रृंखलामा मन्त्री पण्डित:
तपाईं अनपेक्षित रुपमा मन्त्री नियुक्त हुनुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट सरप्राइज पाउनु भएको हो?
म किन पहिलो प्रथामिकतामा परें त्यो त प्रधानमन्त्री ज्यूलार्इ नै थाहा होला। तर यो सरकारमा मन्त्रालय समायोजन हुने स्थिति छ र मन्त्रालयको संख्या पनि घट्छ। अर्कोतिर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको कुरा अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा त्यो पार्टीबाट पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने भएकाले भविश्यमा अफ्ठ्यारो नहुनेगरी प्रधानमन्त्री ज्यूले सजिलो ठाउँबाट सुरु गरौं भनेर मलार्इ चयन गर्नुभएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान छ।
देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक तपाईंले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, मन्त्रालयमा ब्रिफिङ पनि लिनुभयो होला, कस्तो लागिरहेको छ?
मैले मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएको छैन। सपथग्रहण गरेको राती मन्त्रालय गएर जिम्मेवारी चाहीँ लिएँ। तर मैले आफ्ना कामका चुनौतीहरु पहिचान नगरेको भन्ने होइन। देश र जनताले मबाट केही आशा पनि गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनसंख्या र वातावरणको क्षेत्रमा मेरा कयौं चुनौतीहरु छन्। एक हिसावमा भन्नुपर्दा जनताको स्वास्थ्य अब मेरो हातमा छ। आइतबारबाट मन्त्रालय प्रवेश गरेर ब्रिफिङ लिन्छु र सबैसँग परिचय गर्छु। मैले आफ्ना चुनौती समाधन गर्न अहिले पर्खिनुबारेक अरु उपाए छैन।
विगतमा राम्रो काम गरेको भनेर चर्चा पाउनु भयो, अब झन् राम्रो गर्नु पर्ने दबाब तपाईंमाथि पक्कै पनि छ। कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ?
राष्ट्रिय र अन्तर्राट्रिय रुपमा जनसंख्या तथा वातावरणको क्षेत्र महत्वपूर्ण नै छ। अझै भन्ने हो भने पर्यावरण दिनहुँ बिग्रिरहेको स्थिति छ। वातावरण मानवमैत्री भन्दा ठिक उल्टो भइरहेको छ। त्यससँगै राजधानी काठमाडौं र अन्य ठूला शहरहरुमा सुत्ने बेलामा मात्र माक्स निकाल्नु पर्ने खराब अवस्था भएकाले वातावरणलार्इ सुधार गर्दै जनसंख्यालार्इ सन्तुलनमा ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले देश र जनताको चाहना अनुरुप काम गर्ने योजनाहरु बनाउँदै छु।
जनसंख्या तथा वातावरणसँगै तपार्इंलार्इ अरु मन्त्रालयको पनि जिम्मा दिने तयारी भएको सुनिँदैछ नि?
यस विषयमा सामान्य कुरा भएपनि केही टुंगो लागेको छैन। टुंगो लागेपछि सबैमाझ आउने नै छ।
तपार्इंको आफ्नै रुची चाहीँ कुन मन्त्रालयमा थियो?
सबै कुरा चाहे अनुसार हुँदैन। त्यसकारण मैले पनि चाहेअनुसारको नभएको होला। तर मैले काम गरेर देखाउने अवसर पाएको छु। त्यसैकारण म सन्तुष्ट पनि छु। काम गर्नलार्इ आफुले चाहेको मन्त्रालयमा नै जानुपर्छ भन्ने हुँदैन। मैले सामान्य प्रशासन मान्त्रालयमा गरेको कामले पनि राम्रो चर्चा पायो। त्यसैले म आफ्नो ठाउँबाट जनता र देशको हित हुने काम गर्छु।
तर माओवादीले मन्त्रीका लागि नाम नै दिएन, सरकार गठनमै फेरि पनि लामो समय लाग्ने देखियो, हैन?
पार्टी एकताको काम अन्तिम चरणमा छ। त्यसैले एकताको काम सक्काएर मन्त्रीको काम गर्ने उहाँहरुले सोच्नु भएको होला। त्यसैकारण आफ्ना प्रतिनिधिलार्इ सरकारमा नपठाएको हुनसक्छ। तर अबको केही दिनभित्रमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ र त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि समावेश हुन्छ। दुर्इवटा पार्टी एकता हुने चानचुने कुरा होइन। सैद्धान्तिक र व्यवहारिक धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैकारणले ढिला भएजस्तो देखिएको हो। अहिले हतार गरेर पछि पछुताउनु भन्दा अहिले नै होसियार भएर काम गर्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यसैकारण हामी सबै कुरालार्इ हेरेर काम गरिरहेका छौं।
प्रकाशित ५ फागुन २०७४, शनिबार | 2018-02-17 20:01:11
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मानवजीवनका लागि योग अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
‘श्रीपेच हरायो’ भन्ने हल्लामा मन्त्रीको विश्वास !
‘आज विहान पौने सात बजे श्रीपेचलाई सोकेशमा ल्याएर राखेका हौँ, त्यसपछि मात्र श्रीपेच हराएको भन्ने हल्ला गलत रहेछ भन्ने लाग्यो।’